192.168.8.1 - Sidee loo Helaa Deuter Router IP?
Sida Loo Helo Deuter Router IP?
Si aad u hagaajiso router-kaaga, waa inaad soo gasho. Markaa sidaas samee, waa inaad fahamtaa cinwaanka IP. Waxaad hubin kartaa cinwaanka IP-ga router-ka ah. Cinwaanka IP-ga wuxuu leeyahay 4 lambar oo lagu kala qaybiyay joogsi buuxa. Cinwaanka IP-ga ee shabakadda wuxuu ka bilaabanayaa 192.168. Caadi ahaan Router waxaa ku jira cinwaanada IP-ga sida 192.168.0.1 ama 192.168.1.1. Ku tiirsan kombiyuutarka ama aaladda, habka aad ku ogaan doonto cinwaankaaga IP ee routerku wuu kala duwanaan doonaa. Hoos waxaa ku yaal tillaabooyinka mid kasta.
Marka hore, waa inaad naftaada ku sharaxdid magacyadan 2 - "router IP" & "default IP gateway." IP-ga router-ku wuxuu u shaqeeyaa sida soo gelitaanka qalabkaaga & internetka ballaadhan waana sababta xitaa loogu yaqaanno “cinwaanka IP-ga ee caadiga ah. ” Dhammaan qalabka ku xiran shabakadda la midka ah waxay u gudbiyaan codsiyadooda adoo adeegsanaya router. Qalabka kaladuwan ayaa si kala duwan u magacaabi doona. Windows PCS wuxuu ku magacaabi doonaa 'default gateway' halka qalabka macruufka ay ku keydin doonaan cinwaanka IP-ga router-ka 'router'.
Ka dib markaad Hesho Deuter Router IP, waxaad kaliya ku qori kartaa barta cinwaanka biraawsarka si aad u gasho router-ka websaydhka.
Tag amarka degdegga ah adoo dib u soo ceshanaya barta baaritaanka & qorista 'cmd'. Daaqad madow ayaa u muuqata meesha aad u baahan doontid inaad ku qorto 'ipconfig'. Cinwaanka iridda asalka ah u baari natiijooyinka.
Hoos waxaa ku yaal tallaabooyinka ugu fudud ee lagu hubin karo router IP:
Riix barta Apple liiska (shaashadda dusheeda)
Dooro 'Nidaamka doorashada koowaad'
Xulo xiriiriyaha shabakadda ee khuseeya
Riix 'TCP / IP'fure u ah cinwaanka IP-ga ee router midig
Marka hore, raadi jidka: Barnaamijyada> Qalabka Nidaamka> Terminalka & qor 'ipconfig'. Waxaad ka heli doontaa IP router-ka oo ku taxan ka sokow 'inet addr'.
Haddii aad isticmaasho iOS8 ama iOS9, u wareejinta Nidaamka> WiFi & riix shabakadaha wireless-ka ee aad hadda ku xiran tahay. Suurtagalnimada qaybta DHCP si loo ogaado router-ka IP.
App-saddexaad oo loo yaqaan 'Wi-Fi Analyzer' waa habka ugu fudud ee qalabka Android. Kadib ku xirnaanta barnaamijka, ku dhufo 'View' menu & dooro 'AP list'. Waxaad daawan doontaa 'ku xiran: [Magaca Shabakadaha]'. Haddii aad ku dhufato, daaqad ayaa lagu soo bandhigayaa macluumaadka shabakadda ee leh router-ka IP.
Bar-hawleedka, riix aagga digniinta. Kadib, riix kuxiran magaca [Shabakadaha Magaca] 'ee liiska soo baxa. Ku dhufo magaca shabakadaha siligga ah & kan xiga 'Shabakadda' calaamadda si aad u muujiso dhicitaanka cinwaanka IP ee router.
Wadada loo helo Deuter router IP
Si aad u ogaato cinwaanka IP-ga ee router-ka kaliya raac talaabooyinka hoose ee la siiyay -
1) ee barta shaqada Booqo bilawga menu & gelinta CMD ee goobta raadinta.
2) ka dib markaad geliso amarka CMD, amarka degdega ah ee leh muuqaalka madow ayaa soo bandhigi doona.
3) Qor amarka 'ipconfig,, amarka degdegga ah. Amarkani wuxuu ku lug leeyahay - muujiya dejimaha IP-ga ee aasaasiga ah & qaabeynta nidaamka oo ay weheliso router ku xiran.
Sida loo ogaado router cinwaanka IP-ga ee Windows-ka
Ku qor Gudida Xakamaynta bar raadinta & ku dhaji astaanta Control Panel;
Hoos kadhegayso aragtida shabakadda ee aragtida & howlaha Internetka & Shabakadda;
Riix magaca Wi-Fi, si aad uga hesho meel u dhow Isku xirnaanta;
Daaqad dhow ayaa soo kici doonta. Faahfaahin Faahfaahin;
Waxaad ka heli doontaa cinwaanka IP-ga la wadaago gudaha IPv4 Default Gateway.
Categories Sida loo Post navigation
Dib u dejiso Router-kaaga Dejin Default